Takumi mafirita ane garandi here?
Kana ndikakwanira firita yemhando yepamusoro, ndinogona here kushandisa yakaderera mhando mafuta?
Iyo firita yemhando yepamusoro haizoponese injini yako kubva pakupfeka zvakanyanya kana paine nguva refu yekushandiswa kwemafuta emhando yepamusoro. Mafuta emhando yepasipasi anowanzoreva kuti zvinowedzera mafuta zvinokurumidza kukurumidza, kuisa kushushikana painjini. Ita shuwa iwe unoshandisa yakanaka yemhando mafuta uye mafirita.
Sefa yemafuta yakaburitswa nguva pfupi yapfuura yaiswa? Ita shuwa kuti chaiyo firita yaive
(a) Tarisa chekare chisimbiso gasket chakabviswa kubva kuinjini inokwidza base ndiro uye iyo ndiro haina kukuvara kana kumonyaniswa. (b) Iva nechokwadi chekuti firita yakanyatsogadzirwa neakavhara gasket nyowani. (c) Tarisa tambo yakasungirirwa haina kukuvara kana kusununguka.
Sei mafirita mazhinji emhepo aine waya skrini?
Kupa simba kune iyo firita nekuda kwekuyerera kwemhepo kuyerera uye nekuchengetedza moto mumamiriro ezvinhu kumashure.
Ndinofanira kuchinja rinhi mweya yangu?
Sefa yemhepo inofanirwa kushandurwa zvine chekuita nekushandira nharaunda yemotokari, semuenzaniso munzvimbo dzinopisa, dzine guruva nguva zhinji inowanzo shanduka nguva inodiwa. Chero zvazvingaitika kurudzira shanduko pamwedzi gumi nemiviri zvisinei nemamiriro ezvinhu kana chinhambwe chakafambwa.
Nei maInjiniya anotanga neAir firita zvinodiwa kutanga?
Nekuti ndiyo yakasarudzika firita. Unfiltered mweya, ine inducted kusvibiswa, inokonzeresa zvakanyanya injini kupfeka.
Ndeupi musiyano uripo pakati pemafuta mafirita anoshandiswa pama carbureti masisitimu maringe neEF
Kazhinji iyo carburetted system inoshanda yakadzvanywa uye ine kuyerera kwakaderera. Mafirita anowanzo kuve nylon muviri. EFI mafirita ndeaya akaumbwa nesimbi, uye yakagadzirirwa kubata kumanikidza kwakakwirira uye kuyerera. Midhiya inogona zvakare kusiyanisa pakati pefirita mhando.